Umzimveliso weeKlabhu zeGalufa yoBugcisa, ukuBonelela ngeeKlabhu zeGalufa kwiiNkonzo zeeGalufa, iSeti yeGalufa yeGalufa | I-Jasde
I-Golf Fairway Wood
Inkonzo ye-OEM / i-ODM yeentloko zegalufa, iiklabhu zegalufa ezisetiweyo
20+ IMINYAKA UMGQALI WEGOLF
Ukuhanjiswa kwe-OEM kuseto lweGalufa, iNtloko yeGalufa kunye nezinye izixhobo zeGalufa
Njengomzi-mveliso weeklabhu zegalufa ezinobuchule ezinamava eminyaka engama-20 +, uJasde ubonelela ngeeklabhu zegalufa ngokubanzi kunye neeseti zegalufa zesiko ngexabiso lefektri. UJasde ulapha ukuzisa ezona klabhu zibalaseleyo zegalufa, ezinomsebenzi olula, umgangatho ophezulu, umgangatho onomtsalane.
Wamkelekile ukujonga iimveliso apha ngezantsi kwaye ufumane iinkcukacha malunga nemveliso yeklabhu yegalufa yeJasde.
Iinkuni ezenziwe ngamafutha ezenziweyo zomqhubi wegalufa kunye neendlela ze-hybrid ezivela eTshayina
I-Foinbow 2pc ye-premium titium titanium yomqhubi we-CG ephantsi eyakhelwe ngesantya esingaphezulu. I-MO.I Iipropathi ezincedayo ukwenza ezona zizinza kwaye zixolele.46CC-ivolumu ephezulu evunyelwe yi-USGE ukuba ichaphazele:I-jasse ye-jassow ye-huedbow ye-hu hu hu hut of Autchina, i-100% yomgangatho osemgangathweni osemgangathweni
Ngokwezifiso ezingasebenziyo ze-CCNC ze-facters egciniweyo evela eTshayina
I-Xenos Series Abect Yenza inqaku lesakhiwo esinokutshabalala. Iplate yedwa ifakwe i-Aluminum ye-Aluminum ye-Aluminum inciphisa umthwalo wentloko yonke le ndlela yoyilo yenza ubume obukhulu bokwenza izinto ezizinzileyo. Ipleyiti yepleyiti ye-flexible yoyilo. I-4Oights kwiplate yedwa iyakwazi ukutshintshwa kwezinto zokufezekisa ubunzima obahlukeneyo bentloko.uyilo kuphela koyilo lunika imvakalelo ebalaseleyo. Izinketho zesiko zibandakanyiwe: I-LOLY PART, I-LORT, GRIR, kunye nobude.I-jasse eyenzelwe ngokwezifiso ze-CCNC ye-CCNC ye-PRNC ye-PRCT ATCHINA, i-100% yomgangatho osemgangathweni osemgangathweni
I-Iron yentsimbi # 7 i-leng ye-leng ye-leng ye-leng ye-leng ye-iron ibeka i-wing yentsimbi ye-wing ngexabiso elifanelekileyo-jasde golf
I-swing ye-goll ye-goll ye-goll ye-goll ye-goll ye-goll ye-golf: 4,5,6,7 Zonke ii-Irons zibude obunye - 37. 25 "I-Ceesset iquka iiklabhu ezisi-7 (4,5, 7, 8, 9, hi) ibenza babe lula ukubetha, ukuxolela ngakumbi kwaye okungaguqukiyo kusetyenziswa i-swing efanayo ye-swing nganye idala umgama oguqukayo phakathi kweeklabhuI-jasde inyibiliki inyibiliki yentsimbi yesi-7 i-Togodprice-jasde, i-100% yomgangatho osemgangathweni
I-Wincge ye-Winc ye-Winc ye-Wedge yeKlabhu eyahlukeneyo yokubeka igalufa yegalufa yegalufa kunye nexabiso elifanelekileyo lokuphosa igalufa yegalufa yegalufa
I-Classic, iPoland inesiPolish kunye neMbonakalo ye-classic bladeIZIPHUMO ZOKUGQIBELAI-Goll Golf Wedge yokufumana ibhola yakho kufutshane nePINI-CNC yobuso obucokisekileyo: kwi-spin enkulu, ukulawula kunye nokuxinanaI-jasde ithumele ivenkile eyahlukeneyo yokubeka igalufa yegalufa ne-Togodprice-jasde, i-6500 yeemitha zegalufa yegalufai-cyIzinketho zesiko zibandakanyiwe: Umbala wentloko, ubuso obumisiweyo obumisiweyo, uphawu, ububele, kunye nobude.
Asingomzi-mveliso wegalufa kuphela weeklabhu zegalufa ezigcweleyo, unikezelo lweeseti zegalufa, ikwa ngamaqabane amashishini alungileyo, eJasde unokukhetha ukuthenga iimveliso zegalufa kunye nokunikwa iinkonzo ongenakufumana naphi na.
Oko kukuthi-Asiboneleli ngeGOLF kuphela, kodwa nakwiINKONZO!
1. Ukusebenza okuphezulu kokusebenza kweetitananium
2. Ixabiso elikhuphisanayo kwiinkuni eziqingqiweyo nakwii-wedges
3. Yomeleleyo R
& D amandla
4. Izixhobo eziphambili
Sinako ukubonelela iimveliso ezikumgangatho ophezulu ngokweemfuno zabathengi ezahlukeneyo '. Iqela leenkonzo zobungcali laseJasde lilapha ukuze lenze iimfuno zakho kwiiklabhu zegalufa kumantongomane nakwiibholiti. Wamkelekile ukuba unxibelelane nathi ukuba unomdla kwinkonzo yeJasde.
Intro kwi-hybrid ye-charbrid wedge-jasde ye-jasf ye-gelf
Sinikezela i-OEM, inkonzo ye-ODM kubathengi abavela kwihlabathi liphela ukusuka kwi-Golf Gese, abaqhubi, iinkuni, ii-irons, imiphetho, iintsholongwane kunye nabanye.Intro ukuya kwi-hybrid wedge-jasde yenkululeko yokulinganisa
Kwi-JASDE, unokukhetha ukuthenga iimveliso kunye nokunikwa iinkonzo ongenakufikelela naphina kwenye indawo.
IXiamen Jasde Sports ngumzi mveliso weeklabhu zegalufa ezinobuchule kunye namava angaphezu kwama-20years kwiintloko zegalufa, iiklabhu zegalufa, iipakeji zegalufa zokubeka kunye nokubonelela ngazo zonke iintlobo zezinto zegalufa. Inkampani yethu ibeka eXiamen, kuMazantsi e-China. Sinikezela ngenkonzo ye-OEM, ye-ODM kunye nemveliso yethu (iKoala, iMazel) kubathengi abavela kwihlabathi liphela. Abaqhubi beGalufa, iinkuni, iintsimbi, i-putters, i-wedges, i-chippers zonke zingenziwa ngokwezifiso.
Khawusixelele nje iimfuno zakho, singenza ngaphezulu kunokuba unokucinga.